फ्रन्चाइजी बिक्री को लागी | फ्रेंचाइजी अवसरहरू Franchiseek
»फ्रेंचाइजी अवसरहरू»मिश्र»फ्रन्चाइज बिक्री
फिचर फ्रेंचाइजी पुन: बिक्री
भर्खरको फ्रन्चाइजी बिक्री
फ्रेंचाइजी बिक्री के हो?
फ्रान्चाइजी पुन: बिक्रिको बिक्रीको लागि फ्रान्चाइजी व्यवसाय हो जुन अघिल्लो फ्रान्चाइजीले चलाइसकेको छ। नतिजाको रूपमा, फ्रेंचाइजी पुन: बिक्री व्यवसाय पहिले नै अवस्थित ग्राहक आधार हुनेछ र सम्पत्ति पहिले नै हस्तान्तरण गर्न।
त्यहाँ धेरै कारण छन् किनकी एक फ्रान्चाइजी उसको वा उनीहरुको फ्रेंचाइजी व्यवसाय बेच्न चाह्न सक्छ। हुनसक्छ तिनीहरू क्यारियर दिशा बदल्न चाहन्छन्, वा तिनीहरू बेच्न र अवकाश खोज्दै छन्।
फ्रन्चाइज पुन: बिक्री लाभ
त्यहाँ एक फ्रन्चाइजी पुन: खरीद को लागी बेफाइदा को एक पूरै दायरा छन्, जो स्टार्टअप को सट्टा एक फ्रेंचाइजी किन्दा को लाभहरु को अतिरिक्त छन्। एक पुन: बिक्रिको फ्रैंचाइजी खरीदको फाइदाहरू समावेश गर्दछ र अवस्थित ग्राहक आधार - तपाइँ कमाउनुहुनेछ। थप रूपमा, तपाईंसँग पहिल्यै नै स्टाफको एक टोली र कार्य प्रणालीको अपरेशन हुनेछ। यसको मतलब यो होइन कि फ्रान्चाइजी पुन: बिक्रीको लगानी सामान्यतया बढी हुन्छ। यो किनभने तपाईं व्यापार, र यसको सबै सम्पत्ति खरीद गर्दै हुनुहुन्छ।
कुन फ्रेंचाइजी बिक्रिहरू उपलब्ध छन्?
फ्रेंचाइजी अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेंचाइजी निर्देशिका को माध्यम बाट ब्राउज तल फ्रान्चाइजी पुन: बिक्री। तपाईंले धेरै धेरै रिसेल फ्रेंचाइजीहरू फेला पार्नुहुनेछ, उद्योगहरूको विस्तृत एर्रेबाट। खाना र पेय पदार्थ, पाल्तु जनावर सम्बन्धित, सेतो कलर र भ्यान आधारित फ्रान्चाइजी सहित।